News | hunger
News | Tag: hunger
के तपाईलाई धेरै भोक लाग्छ ?
एजेन्सी । यदी तपाईलाई धेरै भोक लाग्छ भने यो कुनै गम्भिर समस्याको संकेत पनि हुनसक्छ । लगातार भोक लाग्नुको कारण तनाव पनि हुनसक्छ । किनभने धेरै तनाव भएमा शरिरमा कोर्टिसोल हर्मोन बन्न थाल्छ । यसका कारण धेरै भोक लाग्ने गर्छ ।
आज पनि उनी भोकै फर्किइन्
हिजो राति नै प्याक गरेर राखेको लन्च बक्स फ्रिजबाट निकालेर हिंडेकी थिइन्, करुणा ।
खाली पेटमा यी खानेकुराहरु खाँदा के हुन्छ ?
एजेन्सी । खाली पेट हुनाले एसिडकोमात्रा बढ्न जान्छ । यस्तो समयमा एसिड बढाउने खाना झन् खानु हुँदैन । यसले डाइजेशनसँग सम्बन्धित समस्याहरु बढाउने गर्छ । यसले कब्जियतको समस्या पनि बनाउन सक्छ । यस कारण खाली पेटमा यी १० खानाहरु कहिल्यै पनि खानु हुँदैन ।
खाली पेटमा यी १० खानेकुरा नखानुहोस् ? यस्ता छन् कारणहरु
खाली पेट हुनाले एसिडकोमात्रा बढ्न जान्छ । यस्तो समयमा एसिड बढाउने खाना झन् खानु हुँदैन । यसले डाइजेशनसँग सम्बन्धित समस्याहरु बढाउने गर्छ ।